Maxaa Cashar laga Baran Karaa Tartankii Doorashada Madaxtooyada 2017 ??.. By: Cali Xaruuri | Togdheer News Network
Maxaa Cashar laga Baran Karaa Tartankii Doorashada Madaxtooyada 2017 ??.. By: Cali Xaruuri
Waa dabciga dimuqraadiyada in bulshadu qeybsanto xilliga
ololaha doorashada (campaign season ).
Waa wax ilaahay loogu mahadiyo ah in aynu haysanno nabad iyo xasilooni aanay haysan dalal badan oo jaarkeenna ah, iyo Dimuqraadiyad aynu kaga tashanno Aayaheenna oo aan ku soo xulan karno Madaxda Hoggaanka Dalka, taas oo aanay haysan waddammo badan oo qaaraddeenna ama adduunka saddexaad ka mid ahi.
13 November 2017, waxa inoo qabsoontay doorasho taariikhi oo xambaarsanayd qodobbo muhiim ah:
-in Markii ugu horreysay somaliland la iska diiwangeliyo, laga ololeeyey lagana codeeyo dhul aanay hore doorashado uga dhici jirin.
– in Markii ugu horreysay Madaxtooyada uu isu soo taago murashax ka soo jeeda Gobolada Bari oo uu Xisbiga UCID Madaxweyne ku-xigeen uga tartamo.
– lagu codeeyo Hannaan casri ah oo aan lagu noq-noqon karin codeynta.
– iyo ugu dambeyn iyadoo si Nabadgelyo ah inoogu dhacday.
Waxa Xusid mudan in Cadowga Somaliland ay saadaalinayeen oo ay jeclaayeen in aynu isku dhacno oo iskaga hornimaadno. Waxay lahaayeen “way is dilayaan oo waa lagu kala tegeyaa”. May noqon oo ilaahay kama dhigin”.
Waxay hilmaansanaayeen Dimuqraadiyada Somaliland in ay tahay mid guun ah (gaamurtay) oo ka soo unkantay ururkii halganka SNM (oo ahaa Jabhadda Dimuqraadi ah) taasoo ay soo mareen ama iskaga dambeeyeen 5 guddoomiye oo dhammaantood ku wada yimid qaab doorasho dimuqraadi ah.
Doorashadani 2017 waxay noqotay mid indhihii Caalamka soo jiidatay, waxana Somaliland lagu tilmaamay SIRAADKA AFRIKA. Waxayna Somaliland noqotay mid la majeerto oo Role Model u noqon doonta gobolkan aynu ku nool nahay, Afrikana uga muuqata sida UBAX meel abaar ah ka baxay uu u muuq dheer yahay.
Waxaa quruxda doorashada sii bila, Madaxweyne Siilaanyo oo ah (a popular president) oo isagoon doorasho lagaga adkaan, sharciguna u ogol yahay in uu mar labaad sii tartamo uu isgu ikhtiyaarkiisa uga degay xukunka, halka madaxda waddamada qaar kursiga ku dheggan yihiin lagana rogi la’yahay.
Runtii qaabkii diiwaan gelinta codbixiyayaasha, hannaankii olalaha doorashada, dooddii Tv-ga ee murashaxiinta iyo habkii codbixinta intuba waxay u dhaceen oo inoogu dhammaadeen jabwi wacan oo ilbaxnimo, bisayl siyaasadeed iyo isu dulqaadasho leh.
horaa loo yidhi (Gari laba nin ma wada raacdo)
Hase yeeshee go’aankii natiijada codbixinta doorashda waxa saluug ka muujiyey Xisbiga Waddani inkastoo uu markii dambe tanaasulay oo aanu wax dacwad ah u gudbinin Maxkamadda Sare oo iyadu natiijada Rasmiga ahayd ama kama dambaysta ahayd ku dawaaqday.
Waa dabciga dimuqraadiyada in bulshadu qeybsanto xilliga ololaha doorashada (campaign season ). Waxase ugub ahayd oo xummadda iyo xaraaradda doorashada kor u qaaday Madax-dhaqameedkii dhex boodayey ee aadka uga dhex muuqday ololahaha doorashada, kuwaas oo dhabqiyey milligiii iyo macnihii doorashada, muujiyayna sawir ka duwan kii Xisbiyada oo aad mooddaysay in Qabaa’ilo ay tartamayaan.
waxaa la yidhi doqoni meel lagu xafiiltamay in lagu kala tegay mooddaa
Haatan iyo gababo waa Mas’uuliyad Wadareed (collective Responsibiliy) in guud ahaan Murashaxiintii, gaar ahaan Madaxweynaha la doortay ka shaqeeyaan wadajirka iyo mideeynta ummadda iyo sidii loo tirtiri lahaa xanaftii iyo xagtimihii tartanka doorashadu keentay. Run ahaantii waa arrin u baahan in
si dhab ah ay uga wada-hadlaan isla markaana uga wada-hawlgalaan hoggaamiyayaasha Xisbiyada qaranka. Madaxweynaha cusub waa inuu maanka ku hayaa in kuwii u codeeyey, kuwii ka codeeyey iyo kuwii aan codeyn intaba uu isagu Madaxweyne u yahay.